Izindaba - The Application of Explosion-proof Flood Light
Ukusetshenziswa Kokukhanya Kokukhukhula Okungabonisi Ukuqhuma
Izibani zezikhukhula eziholele ekuqhumeni, amalambu asezindlini, izinto zokukhanyisa ngaphandle nazo zinomsebenzi wokuhlobisa imvelo nokuhlobisa ubuhle bendawo. Izibani zezikhukhula eziholele ekuqhumeni zikhishwe ngaphandle komongo. Izibani zezikhukhula eziholelwe ekuqhumeni ziwuhlobo lwezinto zokukhanyisa zangaphandle ezisetshenziswa ezindlini.
Isebenzisa izici zokukhiqizwa kokushisa okuphansi kwe-LED ukuqeda ubufakazi bokuqhuma okungaphephile, nempilo ende yomthombo wokukhanya we-LED; ibhethri ligcina ukukhanya okuzinzile ekugcineni kokushaja okuphelele nokukhishwa; imishini yokuhlanza ukushisa ifakiwe ezindlini zesibani ukuqeda ukushisa okusebenzayo kwemodyuli ye-LED, Ukuqinisekisa ukusimama kokusetshenziswa, okulungele ukukhanyisa ezimayini zamalahle, uphethiloli, ujantshi, ukulawula izikhukhula neminye imisebenzi. Ukukhanya kwezikhukhula okuholele ekuqhumeni kobungcweti Ochwepheshe oholele ukuqhuma kwezikhukhula ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zemisebenzi ehlukahlukene yokukhiqiza kanye nezidingo zezimo zemishini yokukhanyisa, isibonakaliso selambu eliphakeme lesibani kufanele likwazi ukukhiqiza amazinga ahlukahlukene okukhanya okusakazekile. Izibani zezikhukhula eziholele ekuqhumeni eziqeqeshiwe Ochwepheshe abakhanyise amalambu ezikhukhula, izibani ezijwayelekile zokukhanyisa ngokuvamile zifakwa ngokulinganayo ezindongeni ezingenhla noma eziseceleni kwendawo yokusebenza ukukhanyisa wonke umsebenzi. Kuyadingeka ukusebenzisa amalambu ezikhukhula aholele ekuqhumeni ngamandla amakhulu futhi kwaholela amalambu ezikhukhula aqinisekisa ukuqhuma. Izibani ezikhanyayo, amalambu okukhipha igesi ephezulu noma inani elikhulu lamalambu we-fluorescent, kunjalo, kunezibani zamanzi ezonga amandla amakhulu ezonga ukuqhuma kwe-LED, njll., Amalambu amaningi ezimboni nawezimayini akulesi sigaba.
Ukukhanya kwesikhukhula okukhombisa ukuqhuma kwe-LED kungukukhanya kwezikhukhula okukhanyisa kakhulu, futhi kukhona nelambu elinamandla afinyelela ku-400W. Amalambu ezikhukhula aqinisekisa ukuqhuma anokuhambisana okuhle kwe-electromagnetic futhi ngeke adale ukuphazamiseka kuzinto ezahlukahlukene ezisebenza ngogesi namanethiwekhi wokuhambisa amandla. Igobolondo le-floodlight-proof proof isebenzisa ubuchwepheshe obuphezulu bokufafaza ngaphandle, obunamandla okumelana nokugqwala, ukumelana nokugqwala, okungangeni manzi nothuli-ubufakazi, futhi ilungele izindawo ezahlukahlukene ezinzima. Uhlelo lokusebenzisa ukukhanya kwe-LED okukhombisa ukuqhuma kuhlanganisa:
1. Izibani zezikhukhula ze-LED eziqinisekisa ukuqhuma zilungele ukukhanyisa okujwayelekile nokukhanyisa ukusebenza ezindaweni ezifana ne-petroleum, i-petrochemical, i-steel, amandla kagesi, ama-termin terminals, imisebenzi yangaphandle nezindawo zokwakha.
2. Ilungele izindawo ezinezidingo zokuvikela okuphezulu nomswakama;
3. Ilungele i-IIA, IIB, iIC imvelo yegesi;
4. Kufanele ibanga lokushisa le-T1-T6.